About Us - Changzhou ay jeceshahay Motor Co., Ltd
Changzhou ay jeceshahay Motor Co., Ltd la aasaasay sannadkii 2000, sida soo saaraha ah motor xirfadeed oo ku yaalla magaalada Changzhou, Shiinaha. awoodda wax soo saarka ka badan in ka badan 0.6 milyan oo matoorrada sanadkiiba. Our Company saddex taxane weyn ee wax soo saarka, matoorrada stepper Hybrid, matoorrada brushless DC iyo darawal baabuurta.
The line alaabta ay jeceshahay uu iibiyey in Shirkadaha wax soo saarka ugu weyn ee Warshadaha ee qalabaynta, qalabka caafimaadka iyo daryeelka caafimaadka, mishiinada printer, qalabka xirxiraan, Technology Information, alaabta qalabka qoyska, iyo qalab ku listo.
Waxaan heysanaa koox Engineering la sanado badan oo waayo aragnimo ah ee Engineering codsiga, Engineering design la dambayn horumarka equipment.Our Engineering Shaqaalaha bixiyaa wax soo saarka ugu wanaagsan ee tayada adeega dib markii sheyga loo gacangeliyey Macaamiisha our. Changzhou ay jeceshahay Motor Co., Ltd helay ay ISO9001: 2000 shahaado oo inta badan wax soo saarka waa CE ansixiyey.
Our Company dhaqmayso mabaadi'da "waxyaabaha cagaaran bixinaya" iyo dhammaan alaabta waa RoHS waafaqsaneyn. Qeybiyaha ah caalamka, Changzhou ay jeceshahay Motor Co., Ltd scrupulously soo socota ku qoran xeerka Xeerarka ganacsiga International oo Practices. Waxaan ku gaari sumcad iskaashiga aannu la Macaamiisha our sanadihii la soo dhaafay. Our Goal waa in "Guuleysan suuqa tayada iyo adeega" taas oo ah codka caadiga ah ee xubin kasta oo kooxda Changzhou ay jeceshahay Motor.
Tijaabo on motor stepper (B)